Ugcino lweeDola zeDola
Udidi: Inkcitho ye-USD
I-USD Coin (i-USDC): Isikhokelo saBokuqala saBokuqala
18 Julayi 2021 | Ukuhlaziywa: 18 Julayi 2021
I-USD Coin (i-USDC) yindawo ezinzileyo ekuxhonywe kuyo kwidola yaseMelika, oko kuthetha ukuba isebenza kanye ngendlela eyenzeka ngayo idola. I-solidcoin, esungulwe ngo-Septemba ngo-2018, yiprojekthi edibeneyo phakathi kwe-Circle kunye ne-crypto giant Coinbase.
I-USDC yenye yeendlela ezizezinye ze-USD-pegged solidcoins ezinje ngeTether (USDT) kunye ne-TrueUSD (TUSD). Isishwankathelo, i-USD Coin yiprojekthi ye-crypto ephawula iidola zaseMelika kwaye iququzelele ukusetyenziswa okuninzi kwi-intanethi nakwiibhloko zoluntu. Okwangoku, inkqubo yokukhupha okanye yokukhulula amathokheni e-USDC aqinisekisiwe nge-ERC-20 Smart Contracts.
Ukudibanisa idola yaseMelika kwi-blockchain kuvumela ukusetyenziswa kwemali ngaphandle komthungo naphi na kwiplanethi ngexesha elincinci, ukuzisa uzinzo olufunwa kakhulu kwii-cryptocurrensets.
Nantsi indlela esebenza ngayo i-USD Coin
Isangqa, inkampani edibeneyo emva kwe-USDC, iqinisekisa ukuba yonke ithokheni ye-USDC ibotshelelwa kwidola enye yase-US. Inkqubo yokuguqula iidola zaseMelika zibe ngamathokheni e-USDC yaziwa ngokuba kukufaka uphawu.
Ukuphawulwa kwe-USD kwi-USDC kulandelwa amanyathelo amathathu, kubandakanya:
Umsebenzisi uthumela i-USD kwiakhawunti yebhanki yomkhupheli.
Umkhupheli usebenzisa iikhontrakthi ze-USDC zeSmart ukwenza isixa esilinganayo se-USDC.
Iingqekembe zeDola ezisandula ukuloba zisiwe kwisipaji semali yedijithali yomsebenzisi, ngelixa iidola zaseMelika ezithathiweyo zifumana indlela yazo yokugcina indawo.
Le nkqubo ingentla isebenza xa kukhutshwa i-USDC. Ngoku, makhe sijonge kwinkqubo yokuhlawulela ezi thokheni nge-USD. Uluhlu olungezantsi yinkqubo yokuhlawulwa kwakhona kwe-USDC:
Umsebenzisi uthumela isicelo sokuhlawulelwa kumnikeli we-USDC.
Umkhupheli uthumela phambili isicelo kwi-USDC Smart Contracts zokutshintshisa amathokheni nge-USD kwaye athathe inani elilinganayo leethokheni kwi-USDC yokuhanjiswa kwegazi.
Umnikeli emva koko uthumela inani eliceliweyo le-USD koovimba bayo kwiakhawunti yebhanki yomsebenzisi. Imirhumo ihlawuliswa umsebenzisi.
Ngokungafaniyo nezinye ii-solidcoins, abadali be-USD Coin baqinisekisa ukuba iprojekthi ibonelela ngokucacileyo eluntwini kwaye isebenza noluhlu lwamaziko emali ukugcina ugcino olupheleleyo lwemali ye-fiat (i-USD).
Oko kwathethi, bonke abakhuphi be-USDC banikwe igunya lokuxela ukubanjwa kwabo kwe-USD rhoqo, ethi ke ipapashwe nguGrant Thornton LLP.
Ungayifumana phi i-USD Coin?
I-USDC ifumaneka ngokulula ukuze ithengwe kwiintshintshiselwano ezininzi ze-cryptocurrency, kubandakanya iBinance, Polionex, Coinbase Pro, Coinbase, CoinEx, OKEx, Kucoin, nezinye ezininzi.
Imali ye-USD: Uhambo ukuza kuthi ga ngoku
Indawo yesibini enkulu ngobukhulu isebenza ngoku ixhaswa ngamaziko aliqela athembekileyo. Ukusukela oko yasungulwa ngo-2018, i-USDC ecosystem isebenzisane nezinto ezingaphezulu kwama-60. Okwangoku, ukugcina ulawulo ngokuchasene nokusetyenziswa ngokungekho mthethweni kwe-solidcoin, abaphuhlisi be-solidcoin banako ukudwelisa uluhlu lweedilesi kwaye babambe imali xa beziva ukungcola okanye ukungabikho semthethweni.
Okokugqibela, ezinye iiprojekthi ezifanayo kwi-USDC zibandakanya i-USDT (Tether), TUSD (TrueUSD), GUSD (Gemini Dollar), DAI (Dai), kunye nePAX (Paxos Standard Token).
tags Cryptocurrency, iindaba, Inkcitho ye-USD, USDC